Baaskiilka dadka waaweyn
Isku dheelitir baaskiil
Maamulaha wax soo saarka
Sidee loo ilaaliyaa baaskiil
Xilliga dugsiga, qaado si aad u doorato baaskiil
Waa maxay faa'iidooyinka jidh ahaaneed ee baaskiil wadistu?
Maxay tahay sababta ugu badan ee baaskiillada buuraha ay ugu qalabeeyeen fargeetooyin ganaax ah?
by idaacadda Subaxnimo 21-07-09
Waxa loogu yeero fargeetada hore ee naxdin-qaadista waa fargeeto hore oo loogu talagalay inay ku shaqeyso shooga-nuugista. Si loogu oggolaado wadayaasha mootooyinka buuraha inay ku yeeshaan waayo-aragnimo raaxo leh oo raaxo leh waddooyinka ka baxsan iyo waddooyinka qulqulaya, fargeeto hore oo naxdin leh ayaa la siiyaa. Tan iyo markii ay ...
Sidee baaskiilada buuraha si dhakhso ah u fuuli karaan oo u badbaadin karaan dadaalka?
Ma leedahay dhalanteed ah in baaskiillada buuraha ay culus yihiin oo aan ku habbooneyn raacitaanka maalin kasta, oo kaliya ay qiimo ku leeyihiin waddooyinka buuraha? Xaqiiqdii, waxay kaliya noqon kartaa inaadan si sax ah u isticmaalin. Xirfadaha fuulista Xulo saamiga ilkaha ee ku habboon xooggaaga, oo ha ku tallaabsan jiirka ...
Sidee loo doortaa baaskiil buur?
Ugu horreyntii, waa inaad fahanto kala soocida mootooyinka buuraha. Baaskiiladaha buuraha ee hadda jira, oo laga qiimeeyo isbeddellada mood ee 10-kii sano ee la soo dhaafay, kala-soocyada guud ee caadiga ah badanaa waxaa ka mid ah: XC, Trail, AM, DH, FR shantaan qaybood. Laga soo bilaabo shantaan qaybood ee waaweyn, tiro ...
Si toos ah looga sii daayo Alibaba
Maanta waa Arbaco. Waxaan si toos ah uga qabannay xafiiska. Mawduuca tooska ahi waa faa iidada baaskiiladaha buuraha Marka aan sida caadiga ah raacno baaskiillada buuraha, qaar waxay dareemaan in raaxada raacitaanku ay aad u wanaagsan tahay, qaarna aysan aad ugu raaxeysan. Marka maxaa sax ah? Arrintaan, waxaan ku dhaqmeynaa ...
Soo Laabashada Dareenka Gubashada — Tartanka The Tour de France China Circle National Circle • Shanghai Lingang New Station Station si guul ah ayaa loo qabtay
On May 30, 2021, the Tour de France China Series National Circle Race • Shanghai Lingang New Station Station si guul leh ayaa loo qabtay oo si guul leh ku dhammaaday. Tour de France waa magaca caanka ah ee caanka ku ah baaskiiladaha baaskiillada adduunka. Waxay ka timid Faransiiska waxayna leedahay taariikh dheer oo ah 116 haa ...
2021 S11 Schmid ayaa u kala jabay si uu ugu guuleysto Bernal si loo xoojiyo faa'iidada funaanadda casaanka ah
Maaddaama ay sii kordhayaan isticmaaleyaasha socdaalka magaalooyinka, jirdhiska iyo baahiyaha kale, ujeeddo badan, waxqabadka gaariga oo dhammaystiran ayaa ah baahida qofka isticmaala, ma aha oo keliya inuu la kulmo ee yuusan kaa hor istaagin magaalada, laakiin sidoo kale wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si fudud u wadato wadista baaskiil wadida, khibrad kicinta baaskiilka iyo madadaalo ....
2021 Bandhigga Baaskiilka Caalamiga ah ee Shiinaha —- maqaalka shirkadda
Waxaa qoray admin on 21-05-08
Maajo 5-8, 2021, Bandhigga 30-aad ee Caalamiga ah ee Baaskiilka Shiinaha ayaa lagu qaban doonaa Shanghai New International Expo Center (Pudong) iyadoo hal-ku-dhiggiisu yahay "iskaashi guul-u-helid ah oo dayactirka gudaha iyo dibaddaba ah". Bandhiggan Shiinaha ayaa dajin doona marxalad loogu talagalay adduunka laba-w ...
Sidee loo doortaa dhererka crank-ka ee baaskiilkaaga buuraha?
Guud ahaan marka laga hadlayo, iibsadayaal yar ayaa tixgelin doona dhererka gooldhalinta mootada buurta, laakiin dherer kaftan ah oo ku habboon ayaa u keeni doona waxoogaa layaab yar yar qofka fuushan. Tusaale ahaan, waxay kordhin kartaa awoodda dheeriga ah ee fuulitaanka waxayna kor u qaadeysaa xakameynta baaskiilka. Dhererka cufnaanta ee 170-175mm ...
Sidee loo doortaa suumanka bareega ee adiga kugu habboon?
Oraahdii hore ee ahayd "Waad fuuli kartaa oo keliya sida ugu dhakhsaha badan ee aad u joojin karto" siddooyinku waa run. Markaad la kulanto cimilo qabow iyo qoyan, waa waqtiga ugu habboon ee la tijaabinayo waxqabadka bareegga ee baaskiilka. Maqaalkani wuxuu soo bandhigayaa oo keliya astaamaha noocyada kala duwan ee baaskiiladaha bareegyada, si aad u dooran karto ...
2021, Tianjin panda Technology Group Baaskiilkeeda cusub ee Warshadaha ayaa dhowaan la bilaabi doonaa. Fadlan u fiirso
Kulankii ugu horreeyay ee hagidda dhiirrigelinta maalgashiga waxaa lagu qabtay Shijiazhuang, caasimadda Gobolka Hebei bishii Abriil 21, 2021 Maareeyahayaga guud, ku-xigeenka guud iyo laba wakiil oo ganacsi oo heer sare ah ayaa ka soo qaybgalay kulankan. Kulankani wuxuu inta badan ka hadlayaa wax soo saarkayada ugu muhiimsan, baarkinka warshadaha p ...
Muxuu baaskiilka magaalada caan u yahay dhawaanahan? Sababta ayaa jirta!
Soo saarista iyo baahinta tallaalka, jawiga kacsan ee xaaladda cudurrada faafa ee adduunka ayaa gaabis ah. Sanadka 2020, dhoofinta baaskiillada ayaa aad u soo kordheysa, waxayna noqoneysaa badeecada kulul sanadka 2020. Asal ahaan, dhoofinta baaskiillada ayaa hoos u dhici doonta sannadka 2021, laakiin baahida jirta ee 2021 weli ma ahan mid sii xumaanaya ...
Waa maxay farqiga u dhexeeya baaskiiladaha isboortiga ee u dhigma tobanaan doolar, boqollaal doolar iyo kumanaan doolar
Baaskiiladu waxay leeyihiin tobanaan dollar, boqolaal doolar iyo kumanaan doolar. Dhamaan waa baaskiil Maxay u kala duwanyihiin sidaas? In kasta oo ay dhammaantood yihiin baaskiilado, qaabeynta baaskiilada ayaa hubaal ka duwan. Baaskiiladaha qaabdhismeedyo kala duwan ayaa ku kala duwan fuulitaanka. In t ...
Cinwaanka: Degmada Wuqing, Tianjin, Shiinaha
Maxay tahay sababta ugu badan ee mootooyinka buuraha loogu qalabeeyo ...
Sidee baaskiiladaha buuraha si dhakhso ah u fuuli karaan oo sa ...
Soo Laabashada Dareenada Gubanaya — Safarkii d ...